बाबुरामले गरे करिष्मा मानन्धरको २ महिनामै बढुवा – YesKathmandu.com
बाबुरामले गरे करिष्मा मानन्धरको २ महिनामै बढुवा
सोमबार ०१, चैत २०७२
काठमाडौं, १ चैत । नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अभिनेत्री करिष्मा मानन्धरमो बढुवा गरेका छन् । नयाँ शक्तिको केन्द्रीय अन्तरिम परिषदकी सदस्य मात्र भएकी अभिनेत्री मानन्धरलाई सचिवालयमा बढुवा गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
करिष्माले जिम्मेवारी लिन खोजेपछि डा. भट्टराइले उनलाई सचिवालय सदस्यमा ल्याएका हुन् । सचिवालय सदस्यमा बढुवा भएकी अभिनेत्री करिष्मा आइतबार बसेको बैठकमा सहभागिता जनाएकी थिइन । १० पौषमा नयाँ शक्तिको घोषणा हुँदा करिष्मा पहिलो पटक राजनीतिक मन्चमा देखा परेकी थिइन ।
उनलाई महिला विभाग जम्मा लगाउने तयारी बाबुराम भट्टराइले गरेका छन् ।
सभामुख ओनसरी गल्ति स्वीकार गदै पुगिन् प्रधानन्यायाधीशको दैलामा
नेता दिल्ली, अभिनेत्री अमेरिका दौडमा !
बालिका बधुकी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जीद्धारा आत्महत्या
म बियर पिउँछु
यी हुन् सामाजिक सञ्जालका ‘सेलिब्रेटी’